Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: nipoitra maraina ritra tolakandro | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: nipoitra maraina ritra tolakandro
Heno miampitapita etsy sy eroa ny fibitsibitsihana mampiely siosio momba izany fahadisoam-panantenan’ny mponina, noho ny tsy fisian’ny fiovana araky ny fiheverany, hono. Miitatra arakaraky ny fiampitapitan’ny resaka ireo tsikera voizin’ny mpitankoritsika, sanatria toy ny hoe efa nandiso làlana sahady androany ny fitondrana tarihin’
ny Filoha Rajoelina ka velona ampitso ny fifampitandremana fa efa kely dia hamarina an-kady.
Na azo lazaina aza fa tsy niredareda ny fanantenana teo amin’ny firaisamonina nentina nitsenana ny fandresen’i Andry Rajoelina, maivan-danja noho ny fitokisana napetraky ny maro an’isa taminy ireo ahiahy nasehon’ny olona nisalasala na tsy nino ny tetika narosony. Fantatry ny be sy ny maro mahitsy fisaina, fa lavitra ezaka ny fanarenana ny firenena noho ny fahalatsahan’ny mponina sy ny toe-piainana ao anatin’ny fahantrana lalina. Ary diso mialoha izay mihevitra fa po tahak’izay dia tratra ny tanjona. Naman’ny mamosavy ny mponina izay mamporisika ny olona hiketraka mialoha amin’ny fitsarana sy fitakiana vokatra raha zara raha manomboka ny ezaka. Izay ilay famingapinganana ny fanefana ny asa, ahafahana hanatratra ny tanjona narosan’ilay nandresy ary nolanian’ny mpifidy.
Dia fitapitaka natao mba hanatsaratsarana tarehy fotsiny ve izany ny fisehoan’ireo resy, tamin’ny fankatoavana ny vokatra sy tamin’ny fileferany hipetraka teo amin’ny toerana sahaza azy araky ny fenitra demôkratika ? Arak’io fenitra io dia manana zo hamela azy hijoro an-kalalahana ny mpanohitra, tsy noho izany anefa no ahafahany mamingapingana ny fitondrana eo amin’ny fanatanterahana ny asa nifanekena tamin’ny fifidianana.
Raha dinihina kely fotsiny izany fanao izany, dia mitory tsy fitiavan-tanindrazana. Lasa toy ny kilalaon-jaza amin’ny fanaovana “Raboka” ny fifandimbiasan-toerana, ka ny mpandresy miezaka hanorina, ary ny resy manao izay ho afany hanakanana na handravana izay kely tafatsangana. Izany hoe tsy hisy zava-banona mihitsy eto an-toerana.
Izay tafakatra anefa dia mifandimby tonga saina momba ny filàna firaisan-kina ahafahana miara-miezaka, izay toe-tsaina miankina amina finoana mipetraka amin’ny asa ifanankonana sy amina fahatokisana ny mpitarika na mpitondra. Lohan’angidina tsy mahataiza ela ny toe-tsaina toy izany. Lasa toy ny afomololo fotsiny, miredareda eo am-piandohana fa tsy mahavita manazava ela.